Sodina vy, Sodina tsy misy savony, Sodina mahitsy nohosorana, DERUNYING
Manana vokatra marobe izahay.
Ny floroplastika sy ny resina akrilika dia manana fananana manohitra fahanterana. Ny faharetana sy ny fanoherana ny harafesin'ny takelaka vy dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fampiasana takelaka vy mifono mateza avo amin'ny firakotra ambonin'ny takelaka vy. Afaka manome takelaka mifono valin'ny toetrandro avo lenta misy fiainana maherin'ny 30 taona isika, mifototra amin'ny fitakian'ny mpanjifa. Ny tsipika famokarana takelaka mifono loko dia azo ampiasaina amin'ny vokatra fananganana avo lenta; fiara; fitaovana ao an-trano; tontonana masoandro; fonosana matevina kor ...
1. Mavesatra maivana Noho ny lanjan'ny lanjan'ny takelaka vy miloko, dia afaka manolotra fitaterana mora sy fametrahana mora izy io, izay hamonjy ny vanim-potoana fananganana. 2. Fiarovana ny tontolo iainana sy fitehirizana vola Ny efitrano fandraisam-bahiny vita amin'ny takelaka vy miloko azo ampiasaina indray, afaka manolotra fiarovana amin'ny tontolo iainana sy fitehirizana vola izy io, ary tsy misy loto ihany koa ary tsy misy tabataba 3. Hery lehibe Noho ny firafitry ny vy, ny vokatra manana fahaiza-manao matanjaka, famatrarana ary fanoherana ...
Ity karazana vokatra ity dia namboarina tamin'ny fomba fandrobohana mafana ihany koa, fa rehefa avy ivelan'ny tanky dia hafana avy hatrany hatramin'ny 500 ℃ hananganana sarimihetsika zinc sy vy manify. Ity ravin-tsavily ity dia manana fihenjana sy fanamafisana tsara. Ny tsipika famokarana nandrisika tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny famokarana vy any Etazonia indrindra, ny tena famaritana ny vokatra dia 0.15-1.5mm * 800 ~ 1250mm. Ny tsipika famokarana dia miaraka amin'ny taratry ny lafaoro maharitra maharitra maharitra; karazana fantsona manafana ...
manana sakany vokatra be dia be izahay: toy ny Seamless Steel Pipe; Sodina mahitsy nohamafisina;
Ny orinasa dia mandray ny hevitra momba ny fitantanana maoderina, manaraka ny famokarana avo lenta sy ny asa fivadihana.
Mba hiantohana ny kalitao sy ny serivisy, dia nifantoka tamin'ny fizotry ny famokarana izahay.
Kalitao avo, fandefasana haingana, vidiny mifaninana
Nahatratra ISO9001 izahay izay manome fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana bebe kokoa.
Ireo antony mampisy hery ny havizanan'ny havizanana ...
Ny tanjaky ny havizanana amin'ny fantsona vy tsy mitongilana avy any Shandong Derunying dia mora tohina amin'ny lafin-javatra ivelany sy anatiny isan-karazany, izay ahitàna ny endrika ivelany, ny habeny, ny s amboniny ...
Ny ambonin'ilay ravina nohosorany dia matanjaka ...
Ny takelaka vita amin'ny savily dia iray amin'ireo vokatra lehibe an'ny orinasanay, ny orinasanay dia afaka mamokatra entana avo lenta miaraka amin'ny fizotran'ny famokarana teknika tena tsara, ary namolavola mpanjifa maro ...
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny ravin-...
Ny takelaka vy nandrisika dia ny hisorohana ny lobolan'ny vy matevina ho harafesina ary hampitombo ny fiainany ilaina. Ny haavon'ny takelaka vy matevina dia hosaronan'ny sosona metaly metaly metaly, ...